Nzọụkwụ 3 iji nwee ihe ịga nke ọma na Social Media Crisis Response | Martech Zone
Nzọụkwụ 3 iji nwee ihe ịga nke ọma na mmeghachi omume mmekọrịta ọha na eze
Tọzdee, Nọvemba 15, 2012 Na Mọnde, Nọmba 13, 2012 Douglas Karr
Anyị nwere mkparịta ụka dị egwu anyị na Steve Kleber nke Kleber & Associates, otu ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ngalaba ụlọ ụlọ. Otu n'ime okwu ndị a tụlere bụ ụjọ ndị ụlọ ọrụ ga-emeri mgbe ha na-ebute mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ dị mkpa ịghọta na mgbe ọgba aghara mere - ọ ka mma ka ị nọrọ n'elu nzaghachi gị na mgbasa ozi karịa ịghara ịnọ ebe ahụ.
Nzọụkwụ 3 na Nzaghachi Nsogbu
Ozugbo tinye ndị ahịa ala na ị ghọta nsogbu ha. N’ezie, kwughachi ya ihe ha mere ka ha mara nke ọma na ị ghọtara ihe na-adịghị mma. Ọ bụrụ na nkọwa doro anya dị, ọ ga-eme ebe ahụ. Ndị ahịa chọrọ ịma na ị na-ege ntị… na ị nwere otu ohere idozi nsogbu a wee hụ na ị ghọtara ya!
Gbaa mbọ hụ na ha mara na ihe banyere gi na-emetuta. Site na ịzaghachi na ime ka ha mata na ị na-elekọta ha n'onwe gị, ị nwere ike belata oke esemokwu ahụ ma hazie ya. No bụghịzi akara na-enweghị ihu, ị bụ onye ha nwere ike ịtụkwasị obi ịnwale idozi nsogbu gị.
Dozie nsogbu ahụ. Enyela ụdị, nọmba ekwentị ma ọ bụ adreesị ozi-e ka ha kpọtụrụ. Ga-edozi nsogbu ahụ. Gị. Ọ bụrụ n ’ịkpọọ onye a onye ọzọ, ha ga-amata gị ozugbo maka ihe ị bụ pho Ọ bụrụ na ị ghọta ma nwee mmasị, ị ga-agbaso ma hụ na edozila okwu a.
Nke a anaghị ekwu na gị onwe gị ga-edozi nsogbu ahụ. Ọ pụtara na ị bụ onye ndu na onye ga-aza onye ahịa ma ọ bụ atụmanya. Ọ bụ ọrụ dịrị gị ime ka onye ahụ rue mkpebi. Ọ bụrụ n ’itufu ma gbaa ọsọ, ọ ga - ebute nsogbu ndị ọzọ. Naghị enwe ekele maka ndị na - eme nke ahụ mgbe ị nwere nsogbu… kedu ihe ị ga - eme ya nye onye ahịa gị?
Okwu ikpeazu na nke a. Mgbe ị doziri nsogbu ahụ, ị ​​mezue otu n'ime mkpọsa kachasị mma ị malitere. Ọ bụrụ na ịhapụ onye ahụ obi ụtọ na afọ ojuju, ohere ga-abụ na ha na netwọkụ ha ga-ekerịta ihe ịga nke ọma ahụ. Nke ahụ mara mma.
Tags: njikwa nsogbunsogbu ọha na ezeelekọta mmadụ mediansogbu mgbasa ozi mmekọrịta
Ngosi: Otu esi akwụ ụgwọ ihe omume gị
Kwụsị Izo Ihe Kacha Mkpa nke Ọnụnọ Weebụ gị
Nov 21, 2012 na 4:13 AM
Nke a blog post bụ nri na oge dị ka m dị nnọọ gbawara meghere 'Brand resilience'. Ndụmọdụ dị mma ebe a ka anyị nwere ike inye ndị ahịa anyị
Nov 30, 2012 na 2:02 AM
Ndụmọdụ gbara ọkpụrụkpụ na ekele dị ukwuu maka ịkekọrịta nke a. N'ezie, nke a bụ nnukwu enyemaka nye onye ọ bụla. Ezigbo ọrụ!